Madaxweyne Farmaajo oo lakulmay dhigiisa Mareykanka Trump – Radio Muqdisho
Madaxweynaha JFS Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Marwada Koowaad ee dalka Marwo Zaynab Cabdi Macalin ayaa ka qeyb galay kulan soo dhaweyn ah oo uu Madaxweynaha Mareykanka Mudane Donald Trump u sameeyay madaxdii kasoo qeyb gashay Meertada 74-aad ee Golaha Qaramada Midoobay.
Madaxda dalalka Caalamka ee ku sugan dalka Mareykanka gaar ahaan Yew York ayaa ka qeyb galay shirka guud ee Golaha Amaanka.
Shirkaas ayaa waxaa looga hadlayaa arrimo badan oo kamid yihiin wax ka qabashada Cimilada Adduunka, cirib tirka Ururadda Argagaxisadda, ladagaalka Saboolnimada iyo sidoo kale arrimaha Waxbarashadda.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kullamo gaar gaar ah Yew York kula yeeshay qaar kamid ah Madaxda dalalka Caalamka ee shirkaas ka qeyb galaya.
Madaxda uu lakulmay waxaa kamid Madaxweynayaasha dalka Kenya iyo Masar iyo Ra’iisul Wasaaraha dalka Belgium-ka iyagoo kawada hadlay arrimo quseeyo Soomaaliya.
Madaxweyne Farmaajo oo khudbad ka jeediyey shir gaar ah oo Qamada Midoobey u qorshaysay Soomaaliya “Sawirro”
Madaxweyne Farmaajo oo khudbad ka jeediyey shir gaar ah oo Qamada Midoobey u qorshaysay Soomaaliya "Sawirro"